SONATA-CANTATA: “The Road Less Travelled” နှင့် ချစ်တတ်ပြီ
“အချစ်သည် ရယူခြင်းမဟုတ်သလို၊ ပေးဆပ်ခြင်းလည်း မဟုတ်။ မြင့်မြတ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။”
မသီတာက “ချစ်တတ်ပြီ” ဟု ဆိုလာတော့ … ချစ်တတ်အောင် အချစ်ကို ဋီကာဖွင့်ပြသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြေးသတိရမိသည်။ စာအုပ်အမည်က “The Road Less Travelled” ဖြစ်သည်။
အချစ်ဟူသည် “မိမိကိုမိမိ ဖြစ်စေ, တစ်ပါးသူတစ်ဦးကိုဖြစ်စေ စိတ်ဓာတ် ရင့်ကျက် မြင့်မားလာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်မည်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိ၏ စိတ်နှလုံးအား ဆန့်ထုတ်သည့် စိတ်စေတနာ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြသည်။
“အသွားနည်းသော လမ်း” ဟူသည့် စာအုပ်နာမည်နှင့် လိုက်အောင်ပင် စာရေးသူ M. Scott Peck ဖွင့်ပြသော အချစ်၏အဓိပ္ပါယ်က တွေ့ဖူးနေကြ အဓိပ္ပါယ်များနှင့် မတူ။ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အလျောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ ဖွင့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အချစ်သည် စိတ်ဓာတ် ရင့်ကျက်မြင့်မားလာစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်။ မိဘတို့သည် မိမိသားသမီး ကောင်းစားရေးအတွက် တစ်နယ်တစ်ကျေးသို့ ကျောင်းထားပေးရသည်လည်း ရှိသည်။ သားသမီးကို မခွဲနိုင်၍ ကျောင်းမလွှတ်ခြင်းသည် အချစ် ဟုတ်ပါ၏လော…။ Peck က မဟုတ်ဟု ဖြေမည်။ “မင်းမရှိရင် အသက်မရှင်ချင်ဘူး” ဟူသော အချစ်မျိုးကို စာရေးသူက အချစ်ဟု မသတ်မှတ်၊ “Passive dependent personality disorder” စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဟု သတ်မှတ်သည်။ အချစ်မဟုတ်ယုံသာမက Anti-love ဟုသတ်မှတ်သည်။ အချစ်သည် ရည်ရွယ်ချက်ပါရသည်။
ထို့ကြောင့် အချစ်သည် စိုက်ထုတ်မှု ကင်းမဲ့သော မတော်တဆကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်။ ရင်ခုန်ခြင်း၊ ချိုမြိန်ခြင်း၊ တသလွမ်းမောခြင်း၊ စူးရှကြွေကွဲခြင်းများသည် အချစ်မဟုတ်။ မတော်တဆ ခလုပ်တိုက်လဲသလို ချစ်မိ၊ ကြိုက်မိသွားခြင်းမျိုး “Falling in love” သည် အချစ်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအချစ်များသည် ကာမဂုဏ်စိတ်နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး၊ တာရှည်ခံသော အချစ်မျိုးမဟုတ်။
စိတ်ပညာအရ မွေးကင်းစကလေးငယ်များသည် မိမိနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခွဲခြားမသိနိုင်သေး။ ကိုယ် ငိုလျှင် တလောကလုံး ငိုသည်။ ကိုယ်ဆာလျှင် လောကကြီး ဆာသည်။ အတ္တနှင့် လောကဟူသော စည်းဘောင်မရှိသေး။ လအတန်ကြာမှ မိမိသည် ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးနှင့် သီးခြားဖြစ်နေသည်ကို ရိပ်မိလာသည်။ ကိုယ် ဆာနေသော်လည်း မိခင်ကနို့ချိုတိုက်ချင်မှ တိုက်မည်။ ကိုယ် ကစားချင်သော်လည်း မိခင်က ချော့မြူချင်မှ ချော့မြူပေလိမ့်မည်။ အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ အတ္တဥခွံက အရည်ထူလာသည်။ အတ္တဘောင် (ego boundary) အတွင်း ပုန်းအောင်းရင်း၊ အထီးကျန်ဝေဒနာကို ခံစားလာရသည်။ အချို့မှာ ငယ်စဉ်ဘ၀တွင် တွေ့ကြုံရသည့် နာကျဉ်းဖွယ် ခံစားချက်များကြောင့် လောကကြီးအပေါ် သံသယစိတ်များဖြင့် စိုးရွံ့၍ပင် နေတတ်သည်။ ချစ်ကြိုက်မိခြင်းက ထိုအထီးကျန်ဝေဒနာကို ခေတ္တဖြေဖျောက်ပေးသည်။ မိမိ၏ စိတ်နှလုံးအား ချစ်သူအပေါ် အပ်နှင်းလိုက်ခြင်းက၊ မိမိ၏ အတ္တဥခွံလေးအား ဖောက်ခွဲလိုက်သလိုဖြစ်ကာ သာယာမှုကိုပေးသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် အတ္တဘောင်ကို ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်း မဟုတ်။ ချဲ့ထွင်လိုက်ခြင်းလည်းမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် “ချစ်ကြိုက်မိ” သွားခြင်းမျိုးက ယာယီခဏသာခံ၍ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲတတ်သည်။ သို့သော် ချစ်ကြိုက်မိခြင်းကို အစပြုကာ အချစ်စစ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားနိုင်သည်။
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် ပန်းပျိုးသူတစ်ဦးကဲ့သို့ မြတ်နိုးနှစ်သက်မှုရှိသည်။ ပန်းချစ်သူသည် ပန်းပင်တို့ကို ပစ်မထား။ ရေလောင်း၊ ပေါင်းသင်၊ မြေသြဇာထည့်တတ်ရသည်။ မိမိချစ်ခင်သော သူ/အရာဝတ္ထုပေါ်တွင် မိမိ၏ စိတ်ဝင်စားမှု၊ စိတ်ခံစားမှုတို့ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ တာဝန်ယူရသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ပညာက Cathexis ဟုခေါ်သည်။ Cathexis သည်လည်း မိမိ၏ အတ္တဥခွံကို ချဲ့ထွင်သည်။ သို့သော်လည်း ဤမျှနှင့်တော့ အချစ်စစ်မဟုတ်သေးဟု Peck ကဆိုသည်။ မိခင်သည် ရင်သွေးငယ်ကို နို့ချိုတိုက်ကြွေး၊ ယုယပိုက်ထွေးကာ ပြုစုပျိုးထောင်သည်။ သို့သော်လည်း မိမိ၏ ရင်သွေးကြီးပြင်းလာ၍ မိမိအား မနာခံတော့သောအခါ အချစ်ကုန်ခမ်း သွားတတ်သေးသည်။ စိတ်နာကျည်းသွား တတ်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် Cathexis သက်သက်သည်လည်း အချစ်စစ် မဟုတ်သေး။ မိမိပြုသမျှ နာခံမည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများအား ချစ်သော အချစ်မျိုးသာဖြစ်သည်ဟု Peck ကဆိုသည်။
ပြုစုပျိုးထောင်မှုဆိုသော်လည်း ခံစားမှု (emotion) ကို ဗဟိုပြုသော ပြုစုပျိုးထောင်မှုမျိုးမဟုတ်။ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် မိမိချစ်သူတို့၏ စိတ်ဓာတ် အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန် အသိပညာဖြင့် ထိန်းကွပ်မှုပါသည့် စေ့ဆော်မှု (volition) စေတနာကို အချစ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏အဓိပ္ပါယ်အဖွင့်တွင် အလိုဆန္ဒ (desire) ဟုမသုံးပဲ စေတနာ (will) သုံးသည်။ “ရေကူးချင်တယ်” နှင့် “ရေကူးမယ်” ဟူသောစကားရပ်နှစ်ခုတွင် အလိုဆန္ဒနှင့် စေတနာတို့၏ ခွန်အားကွာခြားပုံကို သိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အချစ်သည် စွန့်စားဝံ့သော သတ္တိခွန်အား ပါသည်။ အချစ်သည် ပေးဆပ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပေးဆပ်ဝံ့သည်။ အနစ်နာ ခံဝံ့သည်။ အဆုံးအရှုံးခံဝံ့သည်။ မိမိအလိုအတိုင်းမဖြစ်၍ အချစ်သည် ကုန်ခမ်းမသွား။ သတိပညာဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ အချစ်စစ်သည် မိမိ၏ စိတ်နှလုံးအား ဖြန့်ထုတ်ထားသည့် စိတ်ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Peck သုံးသွားသော ဝေါဟာရများနှင့် ဖွင့်ဆိုသွားသော အချစ်၏ အဓိပ္ပါယ်သည် နားလည်ရ ခက်လောက်အောင် နက်ရှိုင်းသည် ဆိုရသော်လည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အနေဖြင့် မေတ္တာတရားကို ပုံဖော်ထားသော ဝေါဟာရများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။ ( မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး)
October 2, 2009 10:30 AM
အင်း… အချစ်အကြောင်းတွေ လာဖတ်သွားတယ်။ မနေ့ညနေက မဒမ်ပေါက ကျနော့်ကို လာပြောတယ်။ မသီတာရေးထားတဲ့ အချစ်အကြောင်းကို ဖတ်ပြီး ကြိုက်လို့တဲ့။
မသီတာနဲ့ ကိုဧရာ ရေးထားတဲ့ အချစ်အကြောင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ…
ပထမအချက်… အချစ်အကြောင်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြန်လည် တွေးတောချင်လာတယ်။
ဒုတိယအချက်…. ကိုယ်သိပ်မချစ်တတ်သေးဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်လာတယ်။
တတိယအချက်…. မြင့်မြတ်တဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်တတ်သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။
ပုထုစဉ် လူသားတွေအတွက်တော့ သားသမီးကို ချစ်တဲ့ မိဘအချစ်က အချစ်လို့ ပြောနေတဲ့အရာတွေအထဲမှာ အစစ်မှန်ဆုံးလို့ ထင်တယ်။
အချစ်စစ်သည် မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည် ဆိုတာ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်...
အောက်က မသီတာရေးတဲ့ စာလုံးတိုင်း အားလုံးကို သေချာဖတ်ပီး ကော်မန့်မရေးရဲတာ..
အခု ပိုပီးလေးနက်တဲ့ စကားလုံးတွေဆိုတော့ ကော်မန့်ပိုမပေးရဲဘူးး
အလေးအနက်ထားပီး သေချာအတွေးပွါး ..ပီး သိမ်းထားရန်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ .. ထားလိုက်ရပါကြောင်း
သိပ်နားမလည်တဲ့အကြောင်းမို့ သေသေချာချာ ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒီလိုစာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေ တွေ့လို့ ဖတ်ပြီးရင်လဲဝေမျှပါအုံးနော်။
ဖတ်ချင်စရာ စာအုပ်ကောင်းလေးကို ညွှန်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ...
အခုတလော စာမရေးချင်.. စာပဲ ဖတ်နေချင်လို့..း))
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ်မိတော့ တကယ် အချစ်စစ်နဲ့ မချစ်တတ်သေးပါလားလို့ ခံစားရပါတယ် ။ ဒီမှာစာလာဖတ်ဖြစ်တဲ့ အခါတိုင်း တခုခု စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတွေ ရတတ်ပါတယ် ။ အဲ့အတွက် ကိုဧရာကိုရော မသီတာကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်..
မသီတာရေ..ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ သံဃောဇဉ်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အချစ်မျိုးကို ညီမ ပိုသဘောကျတယ် သိလား :) မြင့်မြတ်တဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားဦးမယ်။
Can I get the ebook version of "The Road Less Travelled" or can you advise me where I can download it?
eBook version များရှိမလားလို့ ရှာကြည့်ပေမယ့် မတွေ့မိသေးပါ။ http://en.wikipedia.org/wiki/M._Scott_Peck မှာတော့ စာရေးသူနဲ့ စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာ အချို့ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
သီတာ့ ချစ်တတ်ပြီ ကို ဖတ်ပြီး ကိုဧရာ့ စာကို ဆက်ဖတ်တော့
အချစ်ရဲ့ အဓိပါယ်တွေ ပိုမိုပေါ်လွင် ပြီး
ထို့ကြောင့် အချစ်သည် စွန့်စားဝံ့သော သတ္တိခွန်အား ပါသည်။ အချစ်သည် ပေးဆပ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပေးဆပ်ဝံ့သည်။ အနစ်နာ ခံဝံ့သည်။ အဆုံးအရှုံးခံဝံ့သည်။ မိမိအလိုအတိုင်းမဖြစ်၍ အချစ်သည် ကုန်ခမ်းမသွား။ သတိပညာဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ အချစ်စစ်သည် မိမိ၏ စိတ်နှလုံးအား ဖြန့်ထုတ်ထားသည့် စိတ်ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လေးလေးနက်နက် ဖတ်သွားပါတယ် ကိုဧရာ နဲ့ သီတာရေ